အဏ္ဏဝါ Spotlight ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး အဏ္ဏဝါ Spotlight မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ကျနော်တို့ကဦးဆောင်ဦးရွက်နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပို့, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာ အဏ္ဏဝါ Spotlight။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းထုံးစံစုပေါင်းစုပ်စီမံကိန်းများအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်တွေကျနော်တို့အများဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များပေးအပ်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအမြန်ဆုံးပေးပို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားဖောက်သည်တစ်ဦး "ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ဖြစ်လာကြပါပြီစတာတွေကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပ, အိန္ဒိယ, ဂျပန်ပေးစွမ်းပါသည်။
ပုံစံ - underwater light
ရေအောက်အလင်းရောင် application များ(ထိုကဲ့သို့သောရေအောက်ငါးဖမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အလင်းရောင်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်)
ငါးခုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထုပ် COB အလင်းအရင်းအမြစ်-ထောင့် elastic optical module ကို,၂၇၀ ဒီဂရီ 3D အလင်းရောင်အကွာအဝေး,အများဆုံး illumination ထောင့်
အမြင့်ပါဝါ 600W,2500W ရိုးရာမီးခွက်နှင့်ညီမျှ,ပါဝါနှင့်ကြာရှည်ခံမှုချွေတာ.
ခိုင်ခံ့သောဖန်မှန်ဘီလူး,အဘယ်သူမျှမမီးသီးအပူသို့မဟုတ်ကွဲအက်ပြproblemနာမရှိပါ,ပိုပြီးအဆင်ပြေ,ရိုးရာမီးခွက်များထက် ပို၍ လုံခြုံစိတ်ချရသောသက်တမ်းရှိသည်.
ရေတောက်ပမှုကိုရေလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်.ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး 100 ဖြစ်ပါတယ်~600W,နှင့်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/marine-spotlight.html